Abantu abaningi ngephutha sikholelwe ukuthi uqwembe - it is kuphela i isici yobuhle. Izinsini kanye namazinyo musa ubuhlungu, futhi ngenxa yalokho, ayikho isizathu Ukuvakashela udokotela wamazinyo. Nokho, ngokuvamile kakhulu uqwembe kuholela ukuthuthukiswa kwezifo ezihlukahlukene ngomlomo. Indlela ukuqeda lokhu izinkathazo, futhi lokho isizathu salokhu yokuntuleka? Sixoxa ngalokhu esihlokweni.
Ukuhlolisisa ku koqweqwe lwawo wamazinyo eduze izinsini noma ngaphakathi kungatholakala amabala ansundu izindawo. Lezi ezifakwa kukhona tartar. Enye igama - calculus. Okunjalo isici umbala kuye lidlulisele amagciwane eziningi, izinhlayiya kunamaqoqo amangqamuzana esikhumba efile, usawoti imali. Ngokuyinhloko Tartar kwakhiwa ezindaweni ezicezile, lapho ukuze uthole isixubho noma Floss kunzima kakhulu. Ukudla okuqinile akuyona njalo uthola khona, kungani ingekho kanye nokuhlanzwa zemvelo.
Izizathu kumiswa calculus
Plaque netshe ezimweni eziningi kwamiswa ngenxa okungafanele inhlanzeko yomlomo. Futhi, isizathu lesi simanga zingaba sendaweni engenampilo ku ngalo ingaphakathi ngomlomo. Ngemva ukungenisa izinsalela ukudla exutshwe ngamathe namagciwane futhi ifomu qwembe phezu izinyo. It is kalula isuswe ngu isixubho ezivamile noma Floss uma ukusetshenziswa njalo. Uma ukuxubha amazinyo njalo, futhi yokwakheka ngamathe sinqamukile emlonyeni, bese ekugcineni ophuzi-plaque Uqinisa futhi iba inhlabathi amalutshwana. Susa nabo kuphela ngokusebenzisa imishini ekhethekile.
Izigaba okuvela tartar
Inqubo kwenzeka ukulandelana elandelayo:
Ukuthola ku namazinyo soft-plaque virus.
Lukhuni we ezifakwa kwaphela izinsuku eziningana.
Gcwalisa isikhala kugasela phosphorus kanye calcium - kwezinsalela namaminerali.
Uma impatho ayitholakali, itshe uqala zikhule ngaphansi nangaphezulu gumline. Ngokuhamba kwesikhathi, uqwembe engasakwazi ukususa ngu isixubho ezivamile. Kuyadingeka ukuba afeze professional izinyo yokuhlanza. Ukususa tartar - inqubo ebalulekile kakhulu ukuze alondoloze impilo ngalo ingaphakathi ngomlomo.
On emashalofini Pharmacy nezitolo ungahlangana izindlela ezihlukahlukene ukuze bathole ukunakekelwa ngomlomo. Ngokwesibonelo, wokuxubha olukhethekile tartar. Ukwakheka kwalo kanye iqukethe wokucwebezelisa izingxenye olwalwenza, kanye enzyme (papain, bromelain), kanye pyrophosphates, kukhona ukuthambisa nokususa microbial qwembe aligugu amanengi ngaphansi kwazo. Toothpaste kusukela tartar Ungasingatha ezifakwa ezincane kuphela. Ikakhulukazi emihle uye wakwenza mhlophe wokuxubha nge abrasiveness okusezingeni eliphezulu. Nokho, lokhu nokunamathisela ngeke zizuzise esimweni sokunganakwa, unomphela, uma kukhona okukhulu qwembe esikhunjeni futhi tartar. Indlela ukuqeda inzika, kulesi simo, yenza wamazinyo ngemva Ukuhlolisisa ngalo ingaphakathi ngomlomo.
Izindlela yokususa calculus
Ngakho, tartar - indlela ayibulale? Okokuqala udinga ukwazi ukuthi le nqubo kumele kwenziwe ehhovisi kwamazinyo. Uma ukhetha ukusebenzisa izindlela ezivamile, kufanele kuqala uxhumane uchwepheshe. Abaningi babo akunalusizo nje kuphela, kodwa futhi kungadala umonakalo omkhulu namazinyo (isibonelo, ukusetshenziswa isihlabathi). Ngaphambili ukususwa calculus kwenzeka athutha, esebenzisa izingwegwe ekhethekile. Kamuva le ndlela kunqatshiwe, ngoba inqubo Kwakubuhlungu, ingaphumeleli, ngemuva kokuthi kuvele umonakalo amazinyo nezinsini zakho. Indlela ukususa tartar namuhla? Kunezindlela eziningana eziphumelelayo.
Uma unquma ukususa tartar nge-ultrasound ke kungenziwa kahle futhi ngokushesha. Ngemva le nqubo, i-amazinyo nezinsini zakho bahlanza ngokugcwele kusukela concrement. Ukuvevezela Ultrasonic kubangela vibration futhi imvamisa ezithile, okuyinto eyenzeka ngaphansi kwethonya ukuhlanzwa mnene evele izinyo obuvela emivubukulweni. Ngenxa umphumela cavitation (eqinile ezingqubuzanayo ezaziyaluzisa uketshezi) kudivayisi umlomo wombhobho asisho uthinte kobuso ngezinyo, okuyinto evimbela ukulimala. Ngaphezu kwalokho, phakathi kwenqubo-mpilo ukhululeka amanzi, okuyinto siba nomphumela magciwane endaweni ngayo. kanye nezimpande izinsini nazo bahlanza athutha. Le nqubo ngokuphelele nokuhlinza ngaphandle kobuhlungu, ukususwa hypersensitivity calculus kwenzeka ngokusebenzisa ijeli imithi ebulala izinzwa. Labo ababenza ngale ndlela ukususwa zamazinyo itshe, sibuyekezwe ikhefu kuphela omuhle. Nokho, qaphela ukuthi usebenzisa ukuhlanzwa ultrasonic ebukhoneni isifo senhliziyo kufanele niqaphele kakhulu. Uma une umshini wokulawula ukushaya kwenhliziyo, ukwenza inqubo enjalo is ngokuphelele contraindicated.
Ukuqeda calculus kwamazinyo futhi esetshenziswa laser. Nokho, le ndlela incane ethandwa kuka ultrasound. Le nqubo kufana yokuhlanza ultrasonic amazinyo futhi ehloselwe ekuphuleni imali amaminerali. Kodwa lezi zinto kuyabiza kakhulu engaphezu kwengu-ultrasound futhi akukho kuyo yonke imitholampilo.
Air Flow Indlela
Lokhu kwelashwa emoyeni-olwalwenza, lapho ubuso izinyo sisetshenziswa isixazululo okuyinto ngaphansi kwengcindezi, ke kwakhiwa izinhlayiya namanzi athile. Phakathi ukwelashwa amazinyo aphuzi enamathela kuyinto ekhishiwe kanye lesikhumba ebusweni. Indlela Air Flow kuyinto inqubo elisizayo ngemva usebenzisa ultrasound. Air nemihuzuko kususa izinsalela qwembe kanzima ukuze afinyelele izindawo, ngaphansi kwethonya phansi futhi koqweqwe lwawo ophucuziwe. inqubo enjalo ingase ibe inqubo ezimele, kodwa kuphumelela kuphela ngokumelene okwakheke rock in the esigabeni sokuqala.
Le ndlela, kanye Air Flow, uba i inqubo asizayo. Ukuze ukusebenzisa kwayo chemical (alikhali noma acid), ngaphansi isenzo zazo ithambisa noma kuyasiqeda tartar, okuyinto kusiza ukususwa kwalo okwalandela. Namuhla, le ndlela cishe akazange asebenzise.
Sithole ukuthi kungani umfanekiso tartar, indlela ayibulale - manje siyazi. Kuyadingeka ukwazi ukuthi ukuvimbela ukuvela calculus. Njengoba sekushiwo ngenhla, i-zokuvikela kanye nokususa wokuxubha ingasetshenziswa ezifakwa encane amaminerali. ngempumelelo ikakhulukazi sasekhaya unama. Kuyinto eziphila abakhuthele futhi uyakwazi ukuthuthukisa ukumelana ukuthuthukiswa kwamazinyo, okuyinto ebaluleke uma kukhona ukuthambekela ekwakhekeni calculus. Mhlophe wokuxubha ukuze zamazinyo calculus zokuvimbela kahle. Nokho, nge ukusetshenziswa isikhathi eside, indlela enjalo kungalimaza koqweqwe lwawo, kunconywa ukuthi enye ke nge wokuxubha abavamile. Futhi ukuvimbela ukwakheka enomkhiqizo wokumbiwa phansi kuzosiza emabhulashini ultrasonic kanye irrigators. emabhulashini Amabhithi uphendukisa ngesivinini (ukunyakaza angaba inkulungwane iminithi), lapho-plaque zihlasela aphume ngempumelelo. Ngaphezu kwalokho, isidingo ubukeza ekudleni kwakho ukuze kuvikelwe calculus kwamazinyo. Esikhathini ekudleni nsuku kufanele kube nezithelo eziningi zokusetshenziswa nemifino (black isithombo, apula, izaqathe, isithombo). imikhiqizo enjalo ngokwemvelo isuswe uqweqwe. Kanti abantu abahlala njalo kudle lemon, uphizi, birch ubisi, iphuzu nokuncipha kumiswa concretion.
Amathiphu ambalwa ngaphezulu ukuze kuvikelwe calculus yamazinyo:
kunconywa ukusebenzisa hhayi kuphela isixubho, kodwa futhi intambo ekhethekile amazinyo yokuhlanza. Kuyinto eshelelelayo flat, ukuze akwazi ukungena ngisho tightest izikhala interdental.
Ngemva kwesidlo ngasinye kufanele Hlambulula umlomo wakho ekhethekile hashaza usizo noma okungenani amanzi.
Uma kungenzeka hashaza umlomo akuyona, ungakwazi ukuhlafuna sugarless gum noma udle i-apula.
toothpastes Special, emabhulashini nezindlela efakazelwe bendabuko njengendlela yokuthola izifo, yebo, ngempumelelo. Kodwa uma kukhona zokwakheka esikhulu amaminerali, uzisuse kuphela wamazinyo-hygienist. Ochwepheshe batusa kakhulu ukuthi wonke, ngaphandle kokukhetha, ukuze afeze uchwepheshe yokuhlanzeka yokuhlanza amazinyo okungenani kabili ngonyaka. Lokhu kuchazwe iqiniso lokuthi ngokwesilinganiso, kwakhiwa tartar is ezinyangeni eziyisithupha. Asebenza ukuvakashelwa hygienist kuyinto zokuvimbela okunokwethenjelwa hhayi kuphela kumiswa calculus, kodwa futhi izifo ezingathi sína kwababhemayo namazinyo ezifana caries, periodontitis, gingivitis. Ngakho-ke, abantu abafuna zinamazinyo enhle enempilo, professional yokuhlanza yokuhlanzeka kabili ngonyaka kumele kube nenqubo yemvelo efanayo, kanye ukusetshenziswa nsuku zonke isixubho nomuthi wokuxubha.